မုန်တိုင်းသင့်လယ်သမားများအားပေးထားသောအကူအညီတွေကိုအကြွေးအဖြစ်သတ်မှတ် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ဘိုကလေး။မြန်မာစစ်အစိုရအနေနဲ.မုန်တိုင်းသင့်လယ်သမားများအားပေးထားသောအကူအညီတွေကိုအကြွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အဆင်ပြေရင် ပြန်ဆပ်ရမည် ဟုပြောသည်၊
လျှိ.ဝှက်တတ်သောစစ်စိုးရအနေနဲ. မေလတုန်းက ရိုက်ခတ်သွားခဲ့သောမုန်တိုင်းသင့်ဒေသများ၌ သွားရောက်လေ့လာရန် သတင်းထောက်တွေကို လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်လောက်ကမှ ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်၊ လေ့လာခရီးစဉ်တွင်၊ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြီး တစ်ရွာလုံးပျက်စီးသွားသော သွားရလာရခက်ခဲသည့်ဒေသများရှိလယ်သမားများအား အကူအညီဘယ်လိုဖြန်.ဖြူးရမလဲဆိုတာကို စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက အစီအစဉ်ချပြပေးခဲ့ပါသည်၊
လယ်သမားတွေ စပါးပြန်စိုက်နိုင်ရေးနှင့် တံငါးသည်တွေ လှေပြန်ဆင်းနိုင်ရေးအတွက် ကျနော်တို.က အကူအညီတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်၊မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအနေနဲ. သူတို.လက်ခံရရှိထားသောအကူအညီတွေကို စစ်အစိုးရအားပြန်ဆပ်ပေးရမည် ဟု စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက အခိုင်အမာပြောဆိုသည်၊
အကယ်၍အကုန်လုံးကအလကာပေးလိုက်လို.ရှိရင် တန်ဘိုးမရှိသလိုထင်တယ်၊၊အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာပြန်ပေးရမည် ဆိုရင် သူတို.က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်၊ဒါကစနစ်ပဲ လို.အမည်မဖော်လိုသည့်စစ်အစိုးရအရာရှိကြီးတစ်ယောက်ကပြောပါသည်၊
စစ်အစိုးရအနေနဲ.ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဆပ်ရမယ့် စနစ်နဲ.အားလုံးဖြန်.ဝေပေးမည်၊ သို.မဟုတ်ရင်၊ အကူအညီတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို. မလွယ်ဘူး လို. အရာရှိကြီးက ထပ်ပြောသည်၊လယ်သမားတွေက ချေးပေးသည့်ငွေတွေကို လက်ခံလိုက်ကလွဲရင် အခြားရွေးစရာလမ်းများမရှိပါ၊ဒါပေမဲ့၊သူတို. ဘယ်လိုပြန်ပေးရမလဲဆိုတာကို သူတို.မသိနိုင်ပါ၊ ကျနော်တို.က စစ်အစိုးရကနေ စက်လှေတွေနှင့် ဒီဇယ်ဆီတွေကို အကြွေးနဲ.ချပေးပါတယ်၊သို.သော်၊ ကျနော်တို.က လက်နဲ.လုပ်သည့်လယ်သမားများငှားဖို. ငွေရှိရန်လိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘဏ်မှာငွေချေးနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီများလိုအပ်နေဆဲ ဟု စက်ဆန်းရွာရှိ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သော အသက် ၅၇ နှစ်ရှိ ဦးကြည်ဝင်းကပြောပါသည်၊
ဒါပေမဲ့၊ စစ်အစိုးရအရာရှိတွေကတော့၊ လယ်သမားတွေက သူတို.ဟာ သူတို.ရပ်တည် လို.ရနေပြီ လို.ခိုင်င်မာမာပြေနေဆဲ ပါ၊ ကမ္ဘာ.စာနပ်ရိက္ခာအဖွဲ.က ရွာသားတွေကို ဆန်အကူအညီတွေ ပို.ပေးနေတယ်၊အကယ်၍ သူတို.က ဆက်မပို.ဘဲရပ်လိုက်ရင်လဲ ရွာသားတွေက သူတို.ဟာ သူတို.ရှာစာလို.ရတယ် လို. စက်ဆန်ရွာအရာရှိ ဦးဇော်မျိုးညွန်.ကပြောပါသည်၊ဒီနှစ်တွင် လယ်သမားအများစုကစပါးမစိုက်နိုင်သည့်အကြောင်းကို သတိပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရေးကုလသမဂ္ဂအရာရှိများနှင်အခြားတာဝန်ရှိသူများ၏စကားကို စစ်အစိုးရ၏နာထဲကြားဖို.အလှမ်းဝေနေသေးသည်၊
လယ်ကွင်းသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဟာ ပိုင်ရှင်တွေနှင့် လယ်သမားများသေးဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့် လုပ်သူမရှိကွက်လပ်ဖြစ်နေတယ် လို. လယ်သမားတွေက အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်လောက်က ပြောပြသည်၊ အကူအညီရရှိသူများကလဲ သူတို.လက်ခံရရှိတဲ့ စပါးစေ့များတစ်ဝက်လောက်ဟာ အခင်းထဲမှာစိုက်တဲ့အခါအညှောက်မထွက်ဘူး လို.ပြောပါသည်၊ ထို.အပြင်၊မြေမြင့်ပိုင်ဒေသမှ ပို.လာသည့်နွားတွေကလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ရွှံ.များသောမြေနိမ့်ပိုင်ဒေသနဲ.မကိုက်ညီဘူး လို.ပြောပါသည်၊
အကယ်၍ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ.က ကျနော်တို.ကို အကူအညီတွေမပို.ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို.ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ၊လောလောဆယ် ကျနော်တို.မှာဝင်ငွေမရှိဘူးကျနော်တို.အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလဲ စပါးပြန်စိုက်ဖို.အခက်အခဲရှိနေတယ်၊ကျနော်တို.မှာ အခုအလုပ်မရှိဘူး၊ ကမ္ဘာ.စာနပ်ရိက္ခာမှပေးနေသောအကူအညီကိုအားကိုးနေရတယ်၊ကျနော်တို. ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အလုပ်များအမြန်ဆုံးလိုအပ်နေတယ်၊ ကျနော်တို.မှာရှိသမျှတွေကိုကိုမုန်တိုင်းထဲမှာပါသွားပြီ ဟု အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ လယ်သမား မိုဝါက အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌနကိုပြောပြသည်။
* Farmers doubt ability to pay back ‘loaned’ aid
BOGALAY: Myanmar’s military regime is giving desperately needed aid to cyclone survivors on credit, requiring them to pay back to the government any assistance offered, officials said.
The secretive military last week officially allowed local journalists to visit the disaster zone for the first time since Cyclone Nargis slammed into the country on May 2. During the tour, local officials laid out their system for delivering aid to farmers in the hardest-hit parts of the Irrawaddy Delta, where entire villages were washed away by the storm that left more than 138,000 people dead or missing.
The officials insisted that government had allowed aid for farmers to plant their fields and for fishermen to return to their boats, but insisted that the cyclone victims would have to reimburse the regime for the aid received. “If everything is free of charge, its value is very low. If something must be paid back, then they try their best to do it. This is the system,” one senior official said, speaking on condition of anonymity.
“The government will distribute everything for them throughapayback system. Otherwise, controlling the aid will be very difficult,” he said. Farmers have no choice but to accept the loans, but say they don’t know how they will ever repay them. “We have received power tillers and diesel on credit from the government. Even then, we still need more help to get bank loans so that we will have cash to hire field hands,” said Kyi Win, 57,afarm owner in Sat San village outside Bogalay.
But local officials insisted that farmers were ready to start surviving on their own. “The World Food Programme is delivering rice for villagers. Even if they stop delivering rice, villagers can feed themselves with their own income,” said Zaw Myo Nyunt,alocal official in Sat San. The official assessment differs markedly with opinions expressed away from the military’s ears, as well as with assessments by UN officials, who have warned that many farmers were not able to plant their crops this year.
Over the last two weeks, many farmers in the delta told AFP that as much as one-third of the region’s cropland could lie idle – simply because so many farmers died that no one is left to tend the fields. Others who have received aid and tried to plant their fields say that as much as half the donated rice plants did not sprout, while draught cattle brought in from mountainous parts of Myanmar have not adapted to the delta’s marshy lowlands.
“If the UN cannot deliver rice and stops their assistance to us, we will be in trouble. We have no income now as our employers are finding it difficult to start their farming,” said Moe Wah,a24-year-old farm worker. “I have no job now and am relying on rice aid from the WFP. All of us need jobs urgently to resume our lives. We lost everything in the cyclone,” she said. afp